Indawo evaliweyo yokupholisa iluphu: Icandelo lezamayeza
Imijikelezo ye-Thermal ibalulekile kuMzi mveliso wezoMayeza, kungoko sifuna izixhobo zokususa ubushushu obungafunekiyo kwinkqubo okanye ukuhambisa ubushushu kwenye imithombo yeendaba ukuze iphinde isetyenziswe.
Ukutshintshwa kobushushu yinxalenye ebalulekileyo yenkqubo yemveliso yamayeza kunye neekhemikhali entle. SPL yenzaInqaba yokupholisa, iHyididid Cooler kunye neEvaporative Condenser Izixhobo ziyilelwe ukusebenza phantsi kweemeko ezifanelekileyo zococeko kwaye ngokuhambelana neZenzo eziLungileyo zokuThengisa. Ifuna ukuhambelana kwaye isebenze ngokufanelekileyo, kodwa kulula ukuyicoca kunye nokuyigcina. Uluhlu lwe-SPL lweMveliso luzalisekisa ezi mfuno kunye nokunye. Kananjalo nokuqinisekisa ukusebenza okuthembekileyo, izisombululo zethu zinceda ukubuyisela ubushushu ekwenzeni iinkqubo zibe noqoqosho ngakumbi.
Ezinye zeenkqubo eziphambili zamayeza ezifuna inkqubo efanelekileyo yokupholisa:
•Ukulungiswa kweqela kwii-reactors ezininzi, efuna amanzi apholisayo ekuphenduleni kweekhemikhali kumaqondo obushushu aphezulu kunye nokukhenkcezwa kweemveliso zokugqibela kubushushu obuphantsi
•Amafutha okupholisa ngaphambi kokugalela kunye nokupakisha
•Ukulawula ubushushu benkqubo yokubumba Xa kusenziwa gelatin njengezingxobo.
•Ukufudumeza kunye nokupholisa okulandelayo kwezinto Iikhrim ngaphambi kokuba zixutywe kunye
•Ukufudumeza nokupholisa ngexesha lokucoca inzalo zamayeza olwelo
•Amanzi asetyenziswa kwinkqubo emanzi emanzi yecwecwe elenzayo